Abavelisi beSpectrum epheleleyo kunye nabaxhasi | I-China epheleleyo ye-Spectrum Factory
Ukunyaniseka okupheleleyo kwi-Ra98 Kaleidolite series
Inkcazo yemveliso Uthotho lwe-Kaleidolite TM ye-LED (Ra = 98 ± 2, Rf> 90, Rg = 100 ± 2) inombala ofanayo kwimithombo yokukhanya kwendalo njengelanga kunye nokukhanya kwe-incandescent, enezixhobo eziphezulu zokunyaniseka okuphezulu, umbala ombala obanzi kunye nombala ophezulu ogcweleyo. Banceda ukufezekisa ukuhanjiswa kombala ngokuchanekileyo ngaphandle kokubingelela ngokusebenza kakuhle kwe-lumen, ukuthembeka kunye neendleko. Izicelo kwizibane zemfundo kunye nezorhwebo, ivenkile ethengisa izinto ezityiwayo, igalari, isibhedlele kunye nokukhanya kwekhaya. Isitshixo ...
Isikhanyiso se studio seTLCI esiphakamileyo
Inkcazo yemveliso Uthotho lwezibane ze-studio ze-studio (Ra = 98 ± 2, Rf> 90, Rg = 100 ± 2) ene-CRI ephezulu, ukuthembeka kunye nombala we-gamut ophucula ngokubonakalayo ukubonakala kwezinto ngokuvumela imibala ukuba ibonakale icacile kwaye icacile kwimifanekiso yekhamera Isalathiso sokuqaqamba komabonakude esiphakamileyo siqinisekisa ukusebenza kakuhle kombala kwizikrini zokubonisa. Amanqaku aphambili ● Isalathiso se-CRI / Rf / Rg ephezulu (TM-30-15) ● R1-R15> 90 ● Isalathiso seTLCI esiphakamileyo Inani leMveliso ...
Umgangatho ophezulu ngokuhanjiswa kombala okungcono
Inkcazo yemveliso Uthotho olunjengolanga nge-CRI ephezulu kunye nokunyaniseka okuphezulu kolu ngcelele kubuyisela umbala oyinyani wemveliso, kwaye ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okuphantsi kukhusela ngokufanelekileyo umbono kunye nombono. Ukongeza, olu luhlu luqulathe ukukhanya okunombala omfusa, odlala indima elungileyo nesebenzayo kwiimfuno zezityalo kunye ne-antibacterial. Iimpawu eziphambili ● Ukunyaniseka kombala ophezulu Rf ● Umbala ochanekileyo we-gamut Rg ● Ubungakanani obuphantsi bokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka Inani leMveliso Ukulinganiswa kwamandla ombane [V] Ukulinganiswa kwangoku [mA] CC ...